I-156CM ye-WM yeedolls iBele eziNkulu eziMnandi zoLusu lweMillie yoLusu
Iidoll zesini ze-TPE,Oonodoli baseYurophu,Ikomityi yesini yoonodoli,Oonodoli besini abancinci
I-Millie 156CM Amabele amakhulu ama-Sexy Beauty TPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi kaMillie:
UMillie unodoli wesini se-TPE onobude obuli-156cm. Umfazi wam kunye nam saya eNew Orleans ukuya kubhiyozela isikhumbuzo sethu xa sasineminyaka engamashumi amathathu. Wayengakaze abukele imovie yamanyala ngaphambili, kodwa ndamqinisekisa ukuba angene kwi-Arcade ekalwe nge-X kwisitrato iBourbon.
I-London 156CM Amabele amakhulu amabhinqa ama-Sexy TPE WM Dolls
Imbali yaseLondon yaseLondon: ILondon iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-156cm. Inokuba ulambile kakhulu, kuba uye wathatha isandla sam wasitsalela phezu kweskipa sakhe, phezu kwempundu yakhe. Ndambuza ukuba ndiyafuna na ndimkhomba. “Owu Thixo wam, ewe,” watsho ephefumlela endlebeni yam. Ndamyeka wahlala ecakwam nge jacket yam...
Arabella 153CM Amabele amakhulu eSilwanyana esiFumanayo ngesondo unodoli oSexy Beaut ...
Imbali yemvelaphi yaseArabella: I-Arabella iyidoli yesini ye-TPE enobude be-153cm. Ndamkhotha umzimba wakhe, ndabe sendimfaka ulwimi kwincanca yakhe eshushu. Iinyawo zakhe ziyangcangcazela. Ndamkhotha ndammunca iclito wade waqina ubuso bam bumanzi. ❤ Oonodoli bethu bokwenyani benziwe ngonyango olukhuselekileyo nolungenatyhefu ...
IValeria-150CM Amabele amakhulu I-Waist TPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi yeValeria: IValeria yidoli yesini ye-TPE enobude obuyi-150cm. Abahlobo bam kunye nam saya elwandle ehlobo ehlobo. Kwakungexesha leshumi ngokuhlwa xa sagqiba kwelokuba sigoduke. Intombi yam kunye nam sahlala kumqolo ongasemva evenini. Khange silifumane ithuba lokudlala yonke impela veki kwaye ...
I-Cecilia -145CM Amabele amakhulu I-Waist TPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi likaCecilia: UCecilia ngunodoli wesini se-TPE ophakame nge-145cm. Kulungile ngokwendalo, sobabini sangena saza sanika iidilesi zethu umqhubi weklabhu. Ukuvala ifestile yeglasi, ndaqonda ukuba uhlala kude kum. Siqhubeke nokudlala ngothando malunga neminye imizuzu emihlanu de wink ...
Reese -145CM Amabele amakhulu I-Waist Tist WPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi ye-Reese: I-Reese iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-145cm. Emva koko wandimema ukuba ndidanise. Ndaphinda ndathi hayi. Ndagqiba ndaya kwi prom netshomi yakhe. Malunga nesiqingatha sokuhamba, le ntombazana yeza kum yaza yandicela ukuba ndidanise. Ndaqonda ukuba kwenzeke ntoni ndathi ewe. Oku kucotha...
I-Rosalie 158CM Amabele amakhulu Amanqatha amaNqina e-TPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi kaRosalie: URosalie ngunodoli wesondo we-TPE nobude be-158cm. Kwiminyaka emsulwa ngakumbi, ndahlala kwisihlalo esingasemva kwindawo yemidlalo bhanyabhanya emnyama kunye nentombazana ekugqibeleni ndafumana isibindi sokwenza idinga. Njengoko ifilimu yayiqhubeka, ndabeka iingalo zam emagxeni akhe. Okothusayo kukuba, yena ngoko nangoko...
I-Alyssa 158CM Amabele amakhulu Amanqatha amaQinqa eTPE WM Dolls
Imbali yemvelaphi yomlambo: Umlambo unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-158cm. Ndaqonda ukuba soyisiwe. Ndiye ndamxelela ukuba kungcono avuke emva koko ndenza iflight yam, sterner about 10 minutes, kwavela i security yase mall. ❤ Oonodoli bethu bokwenyani benziwe nge-TPE yonyango ekhuselekileyo nengenabungozi, eyi-almo ...
USara 158CM Amabele Amakhulu Anqabileyo Esinqeni TPE WM Dolls
Imbali yemvelaphi kaSara: USara unodoli wesondo we-TPE nobude be-158cm. Kweli nqanaba, ndanelisekile yindlela izinto ezihamba ngayo ... sele ndiza konwaba ngakumbi. Uthe ulwimi lwakhe lungena emlonyeni wam, waqala wandincamisa esidleleni ehambisa imilebe yakhe ebamba esidleleni, waqala wandiphulula umlenze, wakhulula...
I-Ariel 158CM Flat Chest yabantu abadala i-TPE WM Dolls
Ibali lemvelaphi ye-Ariel: I-Ariel iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-158cm. Uthe xa evula ucango enxibe iikawusi neesuspenders kuphela, ndaqina mpela. Unditsalele endlini waguqa endivuthela ndade ndamdubula emabeleni. ❤ Oonodoli bethu bokwenyani benziwe ngokukhuselekileyo kwaye aba…
ICatalina 161CM Amabele amahle abantu abadala i-TPE WM Dolls
Imbali yemvelaphi yaseCatalina: UCatalina unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-161cm. Wandithambisa emqolo wandithambisa kakuhle. Ndeva ukuba sele eqalisa ukundihlisa ibhulukhwe yam yebhikini, kwaye ayizange imnqande. Wandiphulula iimpundu nemilenze, wanditwabulula kancinci kancinci. Wandihlekisa ngempundu yam...